Timo Hindidu Cibaado ahaan Isaga Xiiraan oo Yurub iyo Afrika Ganacsi ahan loo Iib keeno | Maankaab.com
Dadka aaminsan Hinduga waxa ay timaha isaga xiiraan cibaado ahaan, balse dadka ku cibaadaysta macbudada caanka ah ee Thiruthani Murugan iyo meelo badan oo Hindiya oo ay malaayiin qof isugu yimadaan waxa timaha la isaga xiira caafimaad ahaan.
Laakiin, waxa ugu caansan ciid cibaadeedka Hindida eek a dhacda hoosta buuralayda galbeedka Chennai ee dalka Hindiya oo ay Hindidu ay qabsan jireen qarniyo badan, isla markaana ay u yaqanaan goobta lagu baryo Aalihada ay caabudaan. Ducada ugu badan ee goobtan ay u yimadaan waa helida nasiib fiican iyo caafimaad. Dadka isugu yimaada dhammaantood waxa ay iska xiiraan timaha, sidaa darteedna waxa ka hawlgala oo ka shaqaysta shirkadaha soo saara timaha la isku qurxiyo.
Dalka Hindiya waxa uu muddo dheer ahaa dalka dhoofiya timaha bina’aadamka ee ugu badan, waxaanna ka soo xarooda ganacsigaas malaayiin dollar ah sannadkiba. Dalka Shiinaha iyo Ruushku waa labada dal ee tartanka kula jira Hindiya.
Dalalka Yurub waa macaamiisha ganacsi ee ugu weyn ee Hindiya u dhoofiyo timahaas. Sidoo kale Eeshiya, Maraykanka iyo Afrikaba waa suuqyada la geeyo. Waxa jira toban macbud oo waaweyn iyo kuwo yar yar oo Hindiya ku yaala oo timahan laga soo qaado. Sidoo kale, waxa jira dad degaannada miyiga ku nool oo ganacsi ahaan timahooda u bixiya si ay u iibgeeyaan.